प्रचण्डपथको महत्त्व अहिले पनि छ : देवेन्द्र पौडेल- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
'हामीले ‘प्रचण्डपथ’ नै भनेको भए कतिपय पक्षसँग एकता सम्भव थिएन । ‘प्रचण्डपथ’ महत्त्व भने अहिले पनि छ । हिजो पचण्डपथ त्यत्तिकै भनेका थिएनौं । त्यसले एउटा निश्चित भावना, विचार, दृष्टिकोण र समर्पणका रूपमा प्रशिक्षित गरेको थियो ।'
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रूपमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह र आन्दोलनको उपलब्धिलाई उल्ट्याउन खोज्ने शक्ति तथा बाह्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीवादसँग प्रमुख अन्तरविरोध रहेको दाबीसहित राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । यसै सन्दर्भमा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :
माओवादीको अबको कार्य कार्यदिशा के हुन्छ ?
माओवादीको कार्यदिशा ‘प्रस्ट समाजवाद’ भन्ने छ । हामीले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार मात्रै भनेर पुग्दैन । संविधान ल्यायौं, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत विषयलाई मौलिक हकसँग जोडेर अगाडि बढायौं । यी उपलब्धिलाई जोगाएर अगाडि बढ्ने भन्ने हो । त्यो भनेको समाजवादी राज्यप्रणाली निर्माण हो । संगठनात्मक, वैचारिक, कार्यक्रमिक रूपमा त्यसलाई लक्ष्य बनाएर जानुपर्ने छ । पार्टीले सम्भवतः त्यही कार्यदिशा लिन्छ ।
पार्टी संरचना कस्तो बन्छ ?
अहिलेको राज्यप्रणाली समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । माओवादीको संगठनात्मक संरचना पनि यसैसग मेल खाने प्रकृतिको हुन्छ ।
‘प्रचण्डपथ’ ब्युँताउन खोजिएको हो ?
होइन । हामीले ‘प्रचण्डपथ’ नै भनेको भए कतिपय पक्षसँग एकता सम्भव थिएन । ‘प्रचण्डपथ’ महत्त्व भने अहिले पनि छ । हिजो पचण्डपथ त्यत्तिकै भनेका थिएनौं । त्यसले एउटा निश्चित भावना, विचार, दृष्टिकोण र समर्पणका रूपमा प्रशिक्षित गरेको थियो । तर अरू पक्षसँग एकता गरेर झन् राम्रो गर्ने, शब्द होइन भावलाई मानेर जाने भनेर त्यसलाई स्थगन गरेका थियौं । त्यो शब्दको विकल्पमा अर्को कुनै योजना ल्याएर वैचारिक रूपमा केन्द्रीकरण हुनुपर्थ्यो, त्यो छुट्न गयो । अब त्यसको समीक्षा गर्ने भनेका छौं । प्रचण्डपथ छलफलको विषय हो । यसमा कतिपय साथीलाई लागेको कुरा भन्नुहोला । पार्टीमा प्रचण्डपथ छोड्नु गल्ती भयो भनेर प्रस्ताव भने आएको होइन ।
माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनपछि कस्तो सैद्धान्तिक धार अँगाल्छ ?
स्पष्ट रूपमा शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा समाजवादी कार्यक्रममा पुग्ने सैद्धान्तिक धार लिन्छौं । आन्दोलनका दुई रूप हुन्छन्– शान्तिपूर्ण र सशस्त्र । हिजो राजतन्त्र थियो, त्यसको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सशस्त्र आन्दोलनको बाटो अपनायौं । त्यतिबेला पनि शान्तिपूर्ण र सशस्त्र दुवै बाटो कम्युनिस्टको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने बाटा हुन्छन् भन्यौं । अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्वाचनमा जनताको मन जितेर उत्पीडित श्रमिक वर्गको हित आर्जन गर्ने बाटो नै लिन्छौं । त्यो सिद्धान्तको बाटो हिँडेर पुग्ने भनेको समाजवाद हो ।
माओवादीको मुख्य अन्तरविरोध कोसँग छ ?
हामीले अन्तरविरोधको किटान पुरानै तरिकाले गरेका छैनौं । हामीले दलाल पुँजीपति र नोकरशाही पुँजीपति वर्ग नै अहिलेको समस्या हुन् । जुनजुन पक्षले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छन्, ती हाम्रा वर्गशत्रु हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादको प्रभावका कारणले श्रमिक उत्पीडित वर्गको हित आर्जन गर्न नदिने तत्त्व पनि हाम्रो वर्गशत्रु हो । त्यसका विरुद्ध जनतालाई जागृत गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरेका छौं । कुनै पार्टी विशेषलाई हामीले इंगित गरेर यो पार्टी यस्तो र त्यो पार्टी त्यस्तो भनेर आलोचना गरेका छैनौं ।
हामीले प्रतिगमनका कुरा पनि उठाएका छौं । प्राप्त उपलब्धि खासगरी एमालेसँग एकता गरेर खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि एकतालाई सुदृढ गर्ने र समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिनुपर्नेमा गज्याङमज्याङ भयो । यथास्थितिबाट पछि हट्ने, संविधान तोडमोड गर्ने काम भयो । शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरौंला भनेको त्यो पनि भएन । त्यसको पनि समीक्षा गरिएको छ । जसले प्रतिगमन र यथास्थितिको प्रतिनिधित्व गर्छ, उसैसँग हाम्रो निर्वाचन र अरू क्रियाकलापमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेतृत्व चयन कसरी हुन्छ ?
नेतृत्व प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भनेका छौं । युवा, महिला, उत्पीडित समुदाय, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जनजाति, मधेसीलगायत संविधानले व्याख्या गरेको समुदायलाई पार्टीका कमिटीमा प्रतिशतका आधारमा समेट्ने गरी प्रणाली बनाएका छौं । क्षमता, योग्यता, निरन्तरता र लगनशीलताका आधारमा अरू फरक पृष्ठभूमिका साथीलाई पनि सहभागी गराउने नेतृत्व प्रणाली बनाउँछौं ।
चुनाव पनि हुन्छ कि सर्वसम्मति ?
जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तभित्र रहेर सकेसम्म सहमति जुटाउने आयोजक कमिटीको चाहना रहन्छ । सहमति भएन भने व्यक्तिगत रूपमा उठ्न प्रोत्साहन गर्छौं । गुटका रूपमा प्यानल ल्याउने व्यवस्था गरेका छैनौं ।
तपाईंको दाबी कुन पदमा हुन्छ ?
पार्टीले आवश्यक ठान्यो र साथीहरूले योग्य ठाने भने पदाधिकारीको कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्न तयार रहन्छु ।
राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादी अरू प्रतिस्पर्धी पार्टीभन्दा फरक भएर आउँछ ?
हाम्रा कार्यक्रम, संस्कार र शैली विचार केन्द्रित पार्टी भएकाले फरक हुन्छौं । त्यसैका निम्ति राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका हौं । लगत्तै महाधिवेशन गर्छौं । अरू पार्टी पद र व्यक्तिकेन्द्रित छन् ।
प्रकाशित : पुस १०, २०७८ ०८:३६
उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्नेसँग माओवादी केन्द्रको प्रमुख अन्तरविरोध
आफ्नै शक्तिमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने, विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी र ध्रुवीकरण गर्दै जाने प्रस्ताव
पुस १०, २०७८ बबिता शर्मा, मणि दाहाल
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रूपमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह र आन्दोलनको उपलब्धिलाई उल्ट्याउन खोज्ने शक्ति तथा बाह्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीवादसँग प्रमुख अन्तरविरोध रहेको दाबीसहित राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । आइतबार सुरु हुने प्रथम एकता राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस हुने प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक र राजकीय क्षेत्रसहितको आन्तरिक मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले वित्तीय पुँजीवादमार्फत हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भने, ‘अहिले युद्ध र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि खतरामा पार्ने विभिन्न प्रकारका प्रतिगामी शक्तिहरूविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ ।’ प्रतिवेदनमा दाहालले उपलब्धिको रक्षा गर्ने र संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न सम्झौताको माध्यमबाट राज्यका सामाजिक–आर्थिक चरित्रमाथि हस्तक्षेप गरी अर्को अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी पुँजी आएको उल्लेख छ । ‘राज्य व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने, देशको सामाजिक सम्बन्धलाई बिथोल्ने, निर्देशन दिने, देशको शोधानान्तरमा पनि घाटा लगाउने काम अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले गरिरहेका छन्,’ प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।
राजनीतिक हिसाबले सर्वहारा–उत्पीडित वर्गको अग्रदस्ता तथा समाजवाद निर्माणको मुख्य शक्तिका रूपमा पार्टीलाई विकास गर्ने दाबी दाहालले गरेका छन् । सम्मेलनमार्फत ‘नयाँ क्रान्तिकारी विचार र पार्टी निर्माण गर्ने संकल्प’ सहित उनले प्रतिवेदनमा समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यनीति अगाडि सारेका छन् ।
बैठकमा दाहालले प्रतिवेदनमा समेटिएको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, नेपाल र विश्व कम्युनिस्ट अवस्था, शान्ति प्रक्रियाको समीक्षा, आगामी कार्यदिशा र पार्टी संगठनको संरचनालगायत विषयमा संक्षिप्त ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनमा एमालेसँगको एकता, संसद् विघटन, नेकपा भंग, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनलगायत विषयमा पनि चर्चा गरेका छन् ।
शनिबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिवेदन अनुमोदन गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर यसका प्रमुख विषयवस्तुबारे जानकारी दिने दाहालको तयारी छ । स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन भने वितरण गरिएको छैन ।
प्रतिवेदनमा दाहालले माओवादीले अंगीकार गर्ने समाजवादको मोडलको विस्तृत व्याख्या गरेको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् । ‘अध्यक्ष कमरेडको प्रतिवेदनले अन्य राजनीति दलले भनेको समाजवादभन्दा माओवादीले भनेको समाजवाद कति फरक छ भन्ने स्पष्ट गर्नेछ,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने ।
पार्टीलाई संगठनात्मक रूपले जनआधारित विशाल कार्यकर्ता पंक्तिसहितको शक्तिका रूपमा विकास गर्ने दाहालको प्रस्ताव छ । आफ्नै शक्तिमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने र विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी र ध्रुवीकरण गर्दै जानुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रतिवेदनमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कायम राख्ने र एकीकृत समाजवादी, जसपासँग संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने उल्लेख छ । साना वामपन्थी पार्टीहरूलाई एकताको प्रक्रियामा ल्याउन प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाउने भएको छ ।
नेताहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैचारिक र सांगठनिक कुरामा ध्यान दिन नसकेको विषयमा कमजोरी भएको स्विकारोक्ति पनि छ । दाहालले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सचिवालयमा पेस गरेका दस्ताबेजलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा राख्ने भएका छन् । प्रतिवेदनमा दाहालले विश्व साम्राज्यवादले लिएको नयाँ रूपलाई परास्त गर्न क्रान्तिकारी विचार र पार्टीको आवश्यकता रहेकामा जोड दिएका छन् । समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यनीति पूरा गर्न आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण जरुरी भएको दाहालले व्याख्या गरेका छन् ।
दाहालका अनुसार संविधानमा भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता एवम् आवासको हकको पूर्ण कार्यान्वयन समाजवादतर्फका आधारभूत कदम हुन् । देशको औद्योगीकरण, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र राष्ट्रिय आयको पछि परेका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्न सके समाजवाद निर्माणका प्रारम्भिक काम हुने उनको विश्लेषण छ । स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहका अनुसार दाहालको प्रतिवेदनमा विज्ञान प्रविधिको विषय पनि छ ।
स्थायी कमिटी बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी १५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव पेस भएको छ । त्यसमा उपाध्यक्ष र सचिव कति राख्ने भन्नेबारे छलफल जारी छ । बैठकमा कतिपय नेताले वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ नेता राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
चिनियाँ नेता माओको जन्मजयन्तीको सन्दर्भ पारेर माओवादीले (पुस ११–१३) राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । पार्टीको नयाँ विधान अनुमोदन र नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व चयन पनि राष्ट्रिय सम्मेलनका मुख्य कार्यसूची छन् । माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनको लोगो सार्वजनिक गरेको छ । लोगोमा ‘नयाँ क्रान्तिकारी विचार र पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन’ नारा लेखिएको छ । लोगोभित्र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रज नेताको प्रतीक छ । यस्तै पार्टीको झन्डा र निर्वाचन चिह्न छ ।
माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा यसअघि १ हजार ५ सय ३३ प्रतिनिधि हुने बताइएकामा अब १ हजार ६ सय ३१ प्रतिनिधि रहने भएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकले नियमित प्रक्रियाबाट आउने प्रतिनिधिको संख्या १ हजार ४ सय ८३ को १० प्रतिशत मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि ५ प्रतिशत मनोनयन निर्णय थियो । पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार १ सय ४८ जना प्रतिनिधि मनोनयनको जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिइएको छ ।
यसैबीच माओवादी केन्द्रले नेकपा मसाल (सम्पर्क केन्द्र) सँग शुक्रबार एकता गरेको छ । मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको मसालबाट फुटेर गठन भएको सम्पर्क केन्द्रसँग राष्ट्रिय सम्मेलनको संघारमा एकता भएको हो । एकता घोषणासभामा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल र मसाल सम्पर्क केन्द्रका तर्फबाट संयोजक लोकेन्द्र लम्सालले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
प्रकाशित : पुस १०, २०७८ ०८:१३